ချင်း ဘာသာရေး သိက္ခာတော်ရ အမျိုးသမီး နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးဆု ရရှိ - Khonumthung Media Group
You are at:Home»Headline»ချင်း ဘာသာရေး သိက္ခာတော်ရ အမျိုးသမီး နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးဆု ရရှိ
ချင်း ဘာသာရေး သိက္ခာတော်ရ အမျိုးသမီး နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးဆု ရရှိ
By admin on	 October 18, 2013 Headline
ဆွီဇာလန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Women’s World Summit Foundation (WWSF) အဖွဲ့မှ နှစ်စဉ်ပေးအပ်လေ့ရှိသော the Women’s Creativity in Rural Life (ကျေးလက်လူနေမှုဘ၀မြှင့်တင်ရေး စွမ်းဆောင်နိုင်သူ)ဆုကို ချင်းပြည်နယ်၊ Mara Evangelical Church သိက္ခာတော်ရ Rev. Mai Ki ကလက်ခံရရှိသည်ဟုသိရသည်။
Rev. Mai Ki သည် ချင်းပြည်နယ် ကျေးလက်ဒေသ မှ အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးငယ်များနှင့် ကိုယ်အင်္ဂါမသန်းစွမ်းသူများ ဘ၀မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ၎င်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်သော International Day of Rural Women နေ့တွင် အဆိုပါ ဆုကိုပေးအပ်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။
Rev Mai Ki သည် ချင်းပြည်နယ်ကျေးလက်ဒေသလူနေမှုဘ၀ကို အများကြီးပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီး ဒေသတွင်း ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း ၇၀ ကျော်ကလည်း သူမ၏ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်တခုဖြစ်သော အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့် တင်ရေးပိုင်းတွင် ၀ိုင်းဝန်ကူညီပံ့ပိုးမှုခံရသည်ဟု WWSF အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
အသက် (၃၈)နှစ်အရွယ် Rev. Mai Ki သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် Masters in Theology ရရှိပြီးနောက် ချင်းပြည်နယ်ကို ပြန် လာပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော မိသားစု ဘ၀တည်ဆေက်ရေး ဆောင်ပုဒ်နှင့် အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့် တင် ရေး( Rural Women Empowerment) ကိုတည်ထောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အားနည်းသူကို ခွန်အားဖြည့်ဆီးရေး ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ် နှင့် Shalom Unit ကို တည် ထောင်ကာ ကျေးလက်နေပြည်သူများအတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်သူလည်းဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသသည်။
ကျေးလက်နေ ချင်းအမျိူးသမီးများ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအတွက် Rev.Mai Ki ၏ အဓိက သင်ကြားပို့ချတဲ့အရာများမှာ မွေးမြူရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ သဘာဝဘေးဒဏ်မှ ကာကွယ်နိုင်ရေး၊ ဂျတ်ခုပ်လုပ်ငန်း၊ ရိုးရာအထည်ချုပ်လုပ်ခြင်း နှင့် အငတ်ဘေးဒဏ်ကြုံတွေ့ချိန်တွင် ၀မ်းစာရှာဖွေနည်း၊ ရုန်းထွက်နည်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် ဆရာမ Rev Maiki သည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသည့် ချင်းပြည်နယ် မတူပီမြို့နယ်၊ လိုင်လင်းပီ ရွာတွင် မိသားစုနှင့် အတူနေထိုင်ပြီး ဆင်းရဲသားပြည်သူများ လူမှုဒုက္ခမှ ရုန်းထွက်နိုင်ရေး အတွက် ကြိုးစား လုပ်ဆောင် နေသည်။
အမျိုးသမီး၊ ကလေးငယ် များ လုံခြုံရေး အတွက် မတူပီ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ဆန္ဒပြတောင်းဆို